Go'aammadii Qadhaadhaa W/Q: C/salan Axmed Muse (Cagaf)
Friday June, 22 2018 - 04:13:52
Wednesday May 24, 2017 - 17:10:35 in by salman abdi
Baalashle suuqa Khayriyada ee badhtamaha Hargeysa ka shaqaysta ayaa aan ahaa. Diyaaradda hoosteeda ayaa aan kabaha ku baalashayn jirey.
Goobtaasi waxa ay ka mid ahayd meelaha ugu dadka badan ee aroortii iyo galabtii loo soo shaah doonto. Xisaabta dugsiga hoose/dhexe iyo luuqada ingiriisida ayaa aan dugsiyada gaarka loo leeyahay ka bartay. Dugsi sare oo aan rafaad badan u maray ayaan markaa waxbarasho ka bilaabay. Dugsiga sare mar heer igu cusub oo sida aan ula qabsan lahaa aan in badan ka fekeri jiray buu ahaa. Sababta oo ah dugsi hoose/dhexe ma aan soo dhigan guud ahaan. Marna waqti badan oo waayihiisa leh baa ay igu qaadatay in aan galaa. Sababta oo ah nolol duruufo adag leh baa igu gedaanayd.
Dusiga kowda iyo badhka duhurnimo ayaa aan gali jirey. Waa fasalka koobaad ee dugsiga sare. Si aan xaafada uga sii qadeeyo biilkana ugu geeyo salaada duhur inta aan la galin ayaa aan rawixi jirey. Daasada baalashka bakhaar weyn oo istaanka basaska Jigjiga yar ka sii jeeda aya aaan ku xeraysan jiray. Dhallinyaro aad u furfuran oo wanaagsan baa bakhaarka lahaa. Maalin baa midka mid ah innamadiu bakhaarku su'aal i waydiiyey:- "Saaxiib ma reer baad leedahay" ayaa uu si kadisa iigu soo tuuray. In aanan xaas lahayn, balse aan xaafadayada biiliyo ayaa aan u sheegay. Sababta uu su'aasha ku keenayna waan waydiiyey. In aannu wali arag baalashle deggan, cibaadaysta oo bilaa balwad ah ayaa uu ii sheegay. Anna in aan arday dugsi sare maraya ahay, markii saddexaad ee aan nolosha baalashle noqdana ay tahay baan u sheegay. Waa uu la yaabay baalashle dugsi sare ah!!
Laba cisho haddii ay ka soo wareegtay is xog waraysigii koobnaa ee inankii bakhaarka na dhexmaray, ayuu iga codsaday marka aan shaqada soo dhammeeyo in aan kulanno. Anna waa aan oggolaaday. Markii aan soo rawaxay baa aannu kulanay. Waxa ii soo bandhigay in aan bakhaarka shaqaale ka noqdo, oo wiil ay walaalo yihiin uu jaamacad dibedda ah tagayo, sidaa darteed u baahan yihiin qof halkii inankaa buuxiya. Waqtiga la shaqaynayo iyo in waxbarashayda aan soo dhigan karo aya aaan waydiiyey. In aan siiyo waqti ay kaga soo tashadaan waxbarashadayda iyo shaqadoodu sida ay isu qaban karto ayuu iga codsaday.
Dhawr maalmood kaddib waxa uu igu soo warceliyay in ay xal hayaan. " Dugsiyada bareefadka ah afarta Sayniska ka dhigo, imtixaanka weyna la fadhiiso dugsiyada sare. Labada saacadood ee bareefadka aad soo dhiganaysana waannu ku fasaxaynaa" ayaa uu ku taliyay. Marka aan imtixaanka fadhiisto, hadhow jaamacadda in ay iga taageeri doonnaan baa uu ii ballanqaaday. In aniga iyo naftaydu aannu ka soo tashanno aya aaan ka codsaday.
Laba arrimood oo aad isugu dhaw oo go'aanka aan ka qaataanna mustaqbalkaygu sida uu u eekaan doonno samaynayo ayaa i hor yaal. Mid walba waxtarka iyo waxyeellada ay yeelan karto ayaa aan ka fekeray. In aan shaqo ta baalashka sumcad iyo dakhli ahaan ba ka roon, oo dugsiga sare marka aan dhammeeyo jaamacaddana la iga caawin doonno doorto iyo in aan baalashlahayga sii ahaado, dugsiga sare ee in aan galitaankiisa hawsha iyo waayuhu iga soo mareenna iska sii dhigto ayaa ay ii taagan tahay in aan kala doorto.
Mid walba dhinacyo badan baan ka istaagay. Haddii aan go'aansado in aan bakhaarka ka shaqeeyo in maxsuulka ii muuqda mid ka shisheeya aan raadiyo ayaa aan isku deyay. Haddii aan baalashlennimada iyo dugsigayga ku sii adkaystana maxsuulka aan muuqan ee ka soo bixi kara in aan oddoroso ayaa aan tijaabiyey. Waxan ka fekeray dugsiga haddii aan ka baxo oo aan bareefadka Sayniska galo, oo bakhaarkana ka shaqeeyo, ka warran haddii aan isku dhacno innamada ileen shaqaalaan ahaye. Jaamacaddii la iga caawinayay iyo shaqadii dakhliga lahayd meeday? Saw dugsigii aan dirqiga ku galay seegi maayo. Waxan ka fekaray fursadaha ku jira shaqadan dakhliga wanaagsan iyo sumcadda leh, ee waxbarashadii bareefadkana aan dhammeeyo jaamacaddana la iga caawiyo sida ay noloshaydu isu beddelayso. Go'aan qadhaadh in aan qaato oo maxsuulkiisu aannu muuqan iyo mid maxsuulkiisa waxtar iyo waxyeellaba muuqato ayaa aan in badan madaxa u xoqday.
In aan baalashlennimada, dakhliga yar iyo dugsiga sare oo guul weyn oo aan gaadhay waqtigaa ahaa sii wato ayaa aan go'aansaday. Dacaayada hablaha iyo innamada aannu is naqaan qaarkood ee baalashlenimada igu liida in aan u sii adkayto aya aan go'aansaday. Innamadiina in aanan bakhaarkooda kala shaqayn karin baan ku warcelyay. Innamo aad u wanaagsan baa ay ahaayeen. Waa ay igu ixtiraameen go'aankayga, waliba boqol kun oo Somaliland shillin ah na waa ay i siiyeen. Boqolkaa kuni kumannaan doollar oo maanta ah baa uu iiga qaalisan yahay. Waana boqolkii gobonnimada. Go'aanka qadhaadh ee aan qaatayna taageero ayuu u noqday.
Haddii la i waydiin lahaa go'aanku goorma ayaa uu qadhaadh yahay, waxa aan odhan lahaa marka aad qaadato go'aan aan maxsuulkiisa waxtar iyo waxyeello midna muuqan, ee aad ka qaadato mid maxsuulkiisu muuqdo.
W/Q: C/salan Axmed Muse (Cagaf)
Muxaadaro: Daawo Raadka uu Quraanku ku leeyahay Nolosha iyo Sh Maxmed Cumar Dirir
31/05/2018 - 17:59:48